3M & Dagaalkii Addunka II Dadka | Saint Paul Historical
3M & Dagaalkii Addunka II Dadka
Juulay 1941, 3M waxaa u shaqaynayay 3,133 shaqaale ah oo ku kala firidhsanaa 4 warshadood iyo 13 waaxood iyo bakhaaro. Waxaa joogay 1.639 shaqaale ah warshada Saint Paul, 372 xafiiska Saint Paul, iyo 143 shaybaadhka cilmi baadhida ee Saint Paul. Dhammaadkii Dagaalka Ogosto 1945, 3M waxay lahayd 7,046 shaqaale ah.
Marka uu dagaalka isa soo taray, in ka badan 2,000 shaqaalaha 3M, labbadaba haween iyo rag, waxay ku biireen ciidamada qalabka sida.
Si loo buuxiyo baahiyaha wakhtiga dagaalka, 3M si aad ah ayay u kordhisay shaqaalaheeda muruq maalka ah. Baahi awgeed, waxay shaqaalaysiisay haweenka iyo raga duqa ah. Badanka shaqaalaha waxay ahaayeen xaasley, walaalada, iyo wiilashada la dhalay ku jiraan Ciidama qalabka sida. Way shaqo tageen si ay u beddelaan kuwan ciidamada ku jiray. Haweenku waxay noqdeen caawiyayaasha shaybaadhka markii u horaysay 1942.
Warshada Saint Paul waxay waday saddex wakhtiyo shaqo oo 7 saacadood ah, 24 saacadood maalintii, todoba maalmood todobaadkii. Mushaharka iyo xaaladaha shaqada waxaa maamulayay shuruucda federaalka ee xiliga dagaalka. Ururada shaqaalahu waay abaabuleen shaqaalaha. Gollaha Ururada Warshadahu (C.I.O) si rasmi aha ayaa loo aqoonsaday 1944.
Shirkadu waxay ku dhiirigelisay shaqaalaha inay iibsadaan saamiyada Dagaalka. Sanadkii 1944, 90 boqolkiiba waxay ka qayb galeen 10 boqolkiiba mushaharkooda.
Jeanie Steele waxay shaqo ka bilowday waaxda cabbaynta ka dib markii wiilkee daaray Ciidamada badda. Waxay ahayd ka qayb gale aad u raba inay iibsato barnamijka Saamiga Dagaalka.
3Mers iyo walaalada James, Howard & Roy Jackson waxay ka soo shaqeeyeen Ciidamada Qalabka sida Dagaalkii Labbaad ee Addunnka. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “3M & Dagaalkii Addunka II Dadka
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/389.